Mubvunzo: Ndiwe fekitari?
A: Isu tiri Vagadziri vari muDongguan, China. Yakasarudzika mumashini ekunyora uye indasitiri yekurongedza kweanopfuura makore gumi, tine zviuru zvemakesi evatengi, tinogamuchirwa kuti iongororwe fekitori.
Q:Unoita sei shuwa kuti yako label mhando yakanaka?
A:Tiri kushandisa yakasimba uye yakasimba mechanical frame uye premium electronic parts akadai sePanasonic,Datasensor,SCK...kuti tive nechokwadi chekuisa mazita akasimba.Chii chimwe,vanonyora vedu vakabvumira CE uye ISO 9001 certification uye vane zvitupa zvepatent.Besides,Fineco yakapihwa Chinese "New High-Tech Enterprise" muna 2017.
Q:Imichina mingani fekitori yako ine?
A: Isu tinogadzira muchina wakajairwa uye wakagadzirwa-wakagadzirwa adhesive labeling muchina.Neotomatiki giredhi, kune semi otomatiki labeler uye otomatiki labeler;Nechigadzirwa chimiro, kune dzakatenderera zvigadzirwa zvinyorwa, mativi ezvigadzirwa zvinyorwa, zvisiri pamutemo zvigadzirwa, zvichingodaro. chigadzirwa chako, mhinduro yekunyora ichapihwa zvinoenderana.
Mubvunzo: Ndeapi mazwi ako ekusimbisa kunaka?
Fineco inonyatso shandisa mutoro weiyo post,
1) Paunosimbisa kurongeka, dhipatimendi redhizaini rinotumira dhizaini yekupedzisira yekusimbisa kwako kusati kwagadzirwa.
2) Mugadziri anoteera dhipatimendi rekugadzirisa kuti ive nechokwadi chega chega chemechani chinogadziriswa nemazvo uye nenguva.
3) Mushure mezvose zvikamu zvaitwa, mugadziri wekuendesa basa kuDhipatimendi reGungano, iro rinoda kuunganidza michina nenguva.
4) Basa rinotamirwa kuAdjustment Dept nemuchina wakaungana.Kutengesa kuchatarisa kufambira mberi uye mhinduro kumutengi.
5) Mushure mevhidhiyo yemutengi kutarisa / kuongorora fekitori, kutengesa kunoronga kuunza.
6) Kana mutengi aine dambudziko panguva yekushandisa, Kutengesa kunobvunza iyo Mushure-yekutengesa Dhipatimendi kuti igadzirise pamwechete.
A: Isu tichachengeta Yedu Vatengi' Dhizaini, Mucherechedzo, uye Sample pamatura edu, uye hatimbofa takaratidza kune vakafanana vatengi.
Mubvunzo: Pane chero nzira yekuisa mushure mekunge tagamuchira muchina?
A: Kazhinji iwe unogona kushandisa labeler zvakananga kana uchinge wagamuchira, nokuti takagadzirisa zvakanaka nemuenzaniso wako kana zvigadzirwa zvakafanana.Besides, bhuku remirayiridzo uye mavhidhiyo zvichapiwa.
Q: Ndeapi label zvinhu zvinoshandiswa nemushini wako?
A: Chinamira chekuzvinamira.
Mubvunzo: Ndeupi rudzi rwemuchina unogona kuzadzisa zvandinoda zvekunyora?
A: Pls ipai zvigadzirwa zvenyu uye saizi yemazita (mufananidzo wemasampuli akanyorwa unobatsira), ipapo mhinduro yakakodzera yekunyora inopihwa zvinoenderana.
Mubvunzo: Pane inishuwarenzi yekuvimbisa kuti ndichawana muchina wandinobhadhara here?
A: Isu tiri pane-saiti cheki mutengesi kubva kuAlibaba.Trade Assurance inopa dziviriro yemhando, pa-nguva kuchengetedzwa kwekutumira uye 100% kuchengetedza kubhadhara kuchengetedza.
Q:Ndaikwanisa sei kuwana zvakasara zvemichina?
A: Zvisiri-zvakakuvadzwa zvakakuvara zvichatumirwa zvakasununguka uye kutumira mahara panguva ye1 waranti yegore.